Qaramada Midoobay oo markale ka digtay Macluul ka dhacda…
“barakacayaashu Waa Dadka Ugu Nugul Soomaaliya, Waxa Ay La…
Qaramada Midoobay ayaa dib usoo celisay cusbooneysiinta walaaaca laga qabano macluul ka dilaacda dalalka caalamka ee dhaqaalahoodu aadka u hooseeyo, maadaama dhibaatooyin kala duwan ay wajahayaan.
Mark lowcock Madaxa Gargaarka Bani aadamnimada Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dalalka ka hooseeyo jaranjarada dhaqaalaha wadamada sare in ay halis uga jiraan in macluul wajahaan.
Waxa uu intaa ku daray in dad gaaraya 265 Malyan oo Ruux ay u baahan yihiin gurmad haddii ay waayaan qaar kamid ah naftooda halis geli doonto, balse kahortag lagu sameeyo xaaladda halista ah ayuu dalbaday.
Dhaqaalaha ku filan ee uu dalbaday waa $10.3 Bilyan oo Doollar si loo maareyo nolosha qoysaska danta yar ee aan awoodin in ay joogto u helaan cunno, Biyo Nadiif ah iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah noloshooda.
“Waxa muuqda waa dhibaatada ka dhalan karta Cunno la’aanta uu sababta u yahay cudurka Covid-19 ee loo xayiray dhaq-dhaqaaqyadii caadiga ahaa iyo gurmadkii isdaba joogga ahaa ee la siin jiray dadka saboolka ah, 265 Milyan oo ruux ayaa halis naftooda geli karta haddi ay waayaan caawinaad kahortag ah” ayuu yiri Mark Locock Madaxa Gargaarka Bani aadamnida QM.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Xannuunka safmarka ah ayaa saameyn weyn ku yeeshay waddamada ugu faqrisan dunida, codsigeena labaad waa in Hay’adaha QM la taga taageero howlaha ay heyaan inta aysan musiibo gaarta meel halis ah noqon macluusha la saadaalinayo”.
Hay’adda Cunnada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR loosoo gaabiyo waxa ay kol hore Xeryaha Qaxootiga ka jartay 30% Raashinka gargaaarka ah, dadka ayaa waayay 70% ay u dhaaftay Hay’adda, Xeryaha qaar dadkii ku sugnaa ayaa isaga tagay kadib markii ay waayeen kaalmadaas.